करिश्माले थालिन् दक्षिणा उठाउन, आखिर किन ? « Ramailo छ
करिश्माले थालिन् दक्षिणा उठाउन, आखिर किन ?
समय : 12:55 pm
तपाईंले दशैंमा दक्षिणा पाउनु भयो ? पक्कै पनि पाउनु भयो होला । यदि तपाईंले दशैंमा टन्नै दक्षिणा पाउनु भएको छ भने केही भाग समाज सेवामा पनि लगाउनुस् । सदाबहार सुन्दरी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले दशैंको दक्षिणा जम्मा गरेर शैक्षिक सेवामा लगाउने अभियान सुरु गरेकी छिन्, परिवर्तनका लागि परिवर्तन ।
करिश्मा ग्रामिण भेगका विद्यालय स्तार उन्नतीका लागि दशैंको दक्षिणा संकलन अभियानमा जुटेकी हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट करिश्माले यस प्रकारको अभियान सुरु गरेकी छिन् । सकारात्मक कार्यका लागि केही रकम संकलन अभियान थालेकी करिश्माले फेसबुकमा लेखेकी छिन, ‘यो एउटा अभियान सुरु गर्ने कोशिस गरिरहेको छु, आफ्नो दक्षिणाबाट । हरेकले दक्षिणा दिनु पर्छ भन्ने छैन तर दिनेले थोरै दिएपनि दिए पुग्छ । देश विकासको लागि साक्षरता जरुरी छ । परिवर्तनका लागि परिवर्तन ।’ करिश्मा आफैं पनि हाल विद्यालय गएर अध्ययन गरिरहेकी छिन् ।